ငြီးငွေ့မှာအမှုမရှိခြင်းမျိုးစုံအတွက်ဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်းမှကြွလာသောအခါဂိမ်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လိင်။ ကျနော်တို့ကြားရတယ်၊အဘယ်ကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်လစ်ဒီယိုအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်နိုင်မကျော်နှစ်အနည်းငယ်အတူတူထားရန်သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းအဖြစ်လူသိများအကောင်းဆုံးလိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်း! သာချင်မှအယူခံမိတ်ဆွေထွက်ရှိသောမေတ္တာအလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းကစားနှင့်အပူ၊လူပေါ်လူအရေးယူ–တစ်ခုခုကဲ့သို့မြည်စေခြင်းငှါအတွက်စိတ်ဝင်စား? ထို့နောက်သေချာပေါက်စဉ်းစားအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာ! ကျနော်တို့ကယ့်ကိုအလင်းတစ်ဦးမီးအောက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းအခါကျနော်တို့ဖက်သို့ဤအခင်းအကျင်းနှင့်အခိုင်အမာယုံကြည်ကြောင်းကျွန်တော်တို့လှန်ဇာတ်နှင့်အချို့ကြီးမားတဲ့။, အခုအချိန်မှာ၊ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းအကြောင်းများထဲကလူအပေါင်းတို့သည်ပလက်ဖောင်းသင်ဖြစ်နိုင်သည်စဉ်းစား၊ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးမှကြွလာသောအခါပြီးပြည့်စုံလိင်တူဂိမ်းကစား။ ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအခြားသူများကချို့တဲ့၏၊ဒါပေမယ့်ကြရပါတယ်–ဒါဟာအများကြီးယူရိုက်နှက်ပြီးသည့်အခါကျွန်တော်တို့သုံးစွဲမယ့်တစ်ဦးလျောက်ပတ်သောငွေပမာဏကိုအချိန်သက်သက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်အရာတစျခုပါ! သင်သံသယရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမှကယ်လွှတ်နေတာလားဒီနေရာမှာအခမဲ့ခံစားရ၊အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးလာမှာ။ ရှိပါတယ်ဤမျှလောက်အမြင်နဲ့ဆိုရင်သို့လိင်လိင်ဂိမ်းများ၊ဒီတယောက်ဖြစ်သွားမော်ကွန်းစွန့်စားမှု၏အကြိုက်ရာမဲ။
တဦးတည်းအကြားအဓိကသော့ချက်ကွဲပြားခြားနားမှုအမေရိကန်နှင့်အခြားသောအရပ်တို့ထွက်ရှိကြောင်းကျွန်တော်တို့သွားမယ့်အင်အားပေးဆောင်ဖို့သင်ပိုက်ဆံအမိန့်အတွက်တက်လက်မှတ်ထိုးရန်။ မှန်–ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းသည်လုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့နှင့်ပြုသောအမှုဖွင့်ကြောင်းသေချာစေရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွားကြသည်။ မြင်၊လျှင်မနိုင်ဖို့သင်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ပတ်ပတ်လည်ကပ်၊ဒါဟာအခွင့်အလမ်းလျော့နည်းစေမယ့်တက်ခူးဖို့အချို့ microtransactions မှန်တကယ်စောင့်ရှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းၚျ။ ဒီဘက်ပါ၊ကျနော်တို့အနေဖြင့်ငါတို့ခြေချောင်းအပေါ်သေချာအောင်ကိုပရိတ်သတ်အိမ်မှာနေကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာလိုချင်လိုတဲ့အခါ။, သတိရနောက်ဆုံးအချိန်ပေးဆောင်အစည်းများ၏ငွေစာရင်းများအတွက်ဂိမ်းနှင့်အဘူးအနီးအဘယ်အရာကိုသင်မျှော်လင့်(အကြည့်၊Cyberpunk ၂၀၇၇!)–ကောင်းစွာအကြောင်းမေ့လျော့နိုင်ပြီးအဲဒီမှာ! ကျနော်တို့အနှောင့်အယှက်ကိုအတွက်ထားဖို့ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်သင်ပျော်မွေ့ရာမရှိ၊အရည်အသွေးမြင့်မားညမ်းဂိမ်းမပါဘဲအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ရှိခြင်းကြောင့်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏တက်လက်မှတ်ထိုးကြာရုံမိနစ်သို့မဟုတ်ဒီတော့ပြီးဖြစ်ရန်အတွက်၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ပြန်ဖို့အကောင်းဆုံးလိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများသင်လိုချင်တာအခါတိုင်းနှင့်၊နောက်တဖန်အ၊တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ ကြောင်းဘယ်လောက်အေးမြသည်?
လူတိုင်းတွင်ကွဲပြားခြားနားသောအရသာနဲ့ဦးစားပေး၊ဒါကြောင့်မကောင်းတစ်စိတ်ကူးသည်ငါတို့အဘို့အရှေ့ဆက်သွားနှင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သာအမျိုးအစားတစ်မျိုး။ အဘယ်ကြောင့်နေရာမှာအသင်းကိုအပေါ်အကောင်းဆုံးလိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများရှိပါတယ်ယ့်ကိုရန်ကျူးလွန်တက်ရောစပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုထက်ပိုနည်းလမ်းတွေအတွက်။ ပထမ၊အထွေထွေအကွက်နှင့်အကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းစဉ်ပြောင်းလဲလာလိမ့်မည်ဟုရှိသမျှတစ်ခုတည်းအချိန်–ဒါဟာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရရှိခြင်းင့်အခြားမိတ္တူနှင့်ငါးပိအလုပ်အတွေ့အကြုံ။ ထို့အပြင်အတွက်၊ငါတို့သည်လည်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်အနုပညာရှင်များ၏သောသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အရသာနှင့်ချဉ်းကပ်မှု။, အဘယ်သူမျှမပိုကောင်းတဲ့နည်းတွေထက်အသီးအသီးအခြား၊အဆီ၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အမြင်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်နိုင်သွားကြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနှင့်ပတ်သက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၏အကျိုးစီးပွား။ မကြိုက်ကြဘူးအထူးသဖြင့်ဂိမ်း? ကောင်းစွာသတင်းကောင်းအကြောင်းရှိ၏တစည်းများမှာအခြားထုတ်လုပ်ပြီးထွက်စစျဆေးနိုငျ! အခုအချိန်မှာ၊ထိုစာကြည့်တိုက်၏အကောင်းဆုံးလိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများသည်ထိုင် ၂၃ ဂိမ်းများနှင့်အတူ၊နောက်ထပ် ၆ တွက်စီစဉ်ထားတဲ့လွှတ်ပေးရန်အတွက်လာမယ့် ၁၂ လအတွင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အချိန်ဇယားကတော်တော်လေးတင်းကြပ်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရှိသည်မသွားပါစေပါဘူးဆင်းသေးနဲ့အစီအစဉ်မရှိတော့အကျင့်ကိုကျင့်၏အနီးအနာဂတ်။, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိကဝတ်ကိုသင်သည်မတူသောအရည်အသွေးလိင်လိင်ဂိမ်းများ–အသင်ချင်၊သင်တို့သည်ကောင်းသောလက်!
ရှိပါတယ်သိသာအန္တရာယ်နဲ့ဆက်စပ်ဖိုင်များဒေါင်းလုပ်ဆွဲထံမှအမည်မသိသတင်းရင်းမြစ်အွန်လိုင်း။ နေစဉ်ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တရားဝင်အသင်းရှိကြောင်းအကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားနှလုံးမှာ၊ထိုသို့ရိုင်းအနောက်ထွက်ရှိအင်တာနက်ပေါ်မှာ! ရလဒ်အနေနှင့်၊ကျနော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်စောပိုင်းအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုအားလုံးဂိမ်းဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးမှာလိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများလိမ့်မည် ၁၀၀%ရာက္ဇာအခြေခံ။ အဲဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ကောင်းစွာ၊ရိုးရှင်းစွာကိုထား၊ဒါကြောင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အတော်လေးမကြာသေးမီဗားရှင်းများ၊ရှု၊မြေခွေးသို့မဟုတ်အစွန်း၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကစားဂိမ်းကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်။, ဟုတ်ကဲ့၊ဒီစကိုဆိုလိုတယ်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များနိုင်စွမ်းရှိကြ၏ဒီမှာမရှိဘဲမည်သည့်အရေးကိစ္စများသမျှ–တော်တော်ချိုမြိန်၊အယ်? ပိုပြီးဖွင့်အဘယျသို့၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိမ်တွဲကိရိယာများမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထိရောက်ပြီးဆိုလိုကိုကယ်တင်နိုင်သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုအပေါ်စက်ကိရိယာပြီးတော့ကျော်လှန်ဖို့အခြားတစုံတယောက်အတွက်အချိန်အတိုတောင်းတဲ့ကာလ။ ဒီကိုဆိုလိုသည်ကြောင်းမခွဲခြားဘဲဘယ်အစက်ကိရိယာပေါ်မှာဆိုရင်၊ပစ္ကိုျအတိပန်းခြံထဲတွင်လမ်းလျှောက်! ပဲနောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်ကိုစဉ်းစားရန်တက်လက်မှတ်ထိုးရန်အကောင်းဆုံးလိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများကျော်အားလုံး၏အခြားနေရာများ။
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့၊အကောင်းဆုံးလိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများရှိပါတယ် ၆ ဂိမ်းအတွက်တက်ကြွစွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်တစည်း၏အခြားအေးမြမှုအရာ။ တဦးတည်း၏အကြီးမားဆုံးအရာအပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နေပါအခုအချိန်မှာတစ်ဦးဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုကိုအတွင်းအဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ဧရိယာကိုစောင့်ကြည့်လိင်လိင်ဗီဒီယိုများ–နှစ်ဦးစလုံးအိမ်နှင့်ကာတွန်း–အပြည့်အဝ ၁၀၈၀။ ကျနော်တို့ရှောင်ရှားချထွက်လည်းမရှိရုံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့နေဆဲအနည်းငယ်ချို့ယွင်းမှုများအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့၊ဒါပေမယ့်ခြုံငုံအဓိကအကြောင်းရင်းနှင့်အတွေးတဲ့အခါသင်ကဲ့သို့မခံစားရဘူးဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊သင်ဆဲကဒီမှာလာချို့လိင်ညစ်ညမ်း။, ထို့အပြင်၊အကောင်းဆုံးအလိင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများထားမည်အချို့သောအများကြီးမေတ္တာရပ်ဝန်းအင်္ဂါအတွက်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အပါအဝင်ဖိုရမ်များနှင့်တစ်ဖက်ဆာဗာ။ ဤမည်စိတ်ကူးနည်းလမ်းများအတွက်သင်မျှဝေဖို့ smut၊နှင့်တွေ့ဆုံရန်အခြားသူများအပေါ်အကြံဉာဏ်များရရန်ဂိမ်းတိုးတက်မှုနှင့်ပင်အကြံပြုချက်များစေဖို့အတွက်စာရင်းသွင်းဖို့ဘယ်လိုပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းစဉ်ပိုကောင်း။ အားလုံးသော–အပေါင်းပိုလာ။။။။